Yusuf Garaad: Dire Dawa 1988 - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Kow iyo Labaatanaad
Dire Dawa 1988 - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Kow iyo Labaatanaad
Dire Dawa, 1988
Khamiis, 1-da September 1988, waxaan subax hore u shaqo tegey xafiiska ICRC. Waa maalinta ugu dambeysa howlgalka kala beddelashada Maxaabbiista Soomaaliya iyo Ethiopia.
Muqdisho 1988, Cabdinuur Sh. oo ka socda Radio Muqdisho
Sheekooyinka aan ka haysto Ethiopia oo ilaa yaraanteydii aan dadka ka maqlayay ayay markaas ku saleysan tahay aragtideyda aan ka qabo Ethiopia. Sheekooyinkaas oo dhan marka la isu geeyo, wax fiicani kuma jirin.
Hadda waxaan u socdaa Ethiopia. Weliba munaasabaddu waa mid dhinac farxad ka leh oo Maxaabbiistii la soo daayay, dhinacna murugo ah oo ku soo xusuusineysa dhimashadii, dhaawicii iyo burburkii dagaalka.
Inkasta oo aan u socdo howl samafal ah, dayaaradda aan la socdo iyo aniga jeebka shaarkeygaba ay ku asteysan tahay calaamadda Laanqeyrta Cas, haddana baqdini igama maqneyn. Waayo sheekooyinka aan maqli jiray ayaan ii oggoleyn in aan cabsi la'aan ahaado.
Eskista - Sawir tusaale ah
Posted by Yusuf Garaad at 08:26:00